ကျူးဘားကိုလံ Pre ဖို့ကိုလမ်းညွှန်
ကျူးဘား၏အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ် ကာရစ်ဘီယန်ကျွန်းစုများ နှင့်ပြည်မမှအနီးဆုံးတဦး။ လူများ, ဖြစ်ကောင်းအမေရိကအလယ်ပိုင်းကနေလာမယ့်ပထမဦးဆုံး 4200 ဘီစီကျူးဘားအပေါ်အခြေချခဲ့သည်။
ကျူးဘားမှာရှိတဲ့ရှေးအကျဆုံးက်ဘ်ဆိုက်များအတော်များများဟာအတွင်းပိုင်းချိုင့်ပေါ်နှင့်ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်တွင်ကျောက်ဂူကျောက်အမိုးအကာအတွင်းတည်ရှိသည်။ ယင်းတို့အနက်, အ Levisa ရော့ခ်အမိုးအကာ, အ Levisa မြစ်ချိုင့်၌အကြောင်းကို 4000 ဘီစီမှချိန်းတွေ့, အများဆုံးရှေးခေတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ရှေးကသြောကာလ ဆိုဒ်များများသောအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောသေးငယ်တဲ့ဓါးသွားသကဲ့သို့ပိတ်သောကျောက်ကိရိယာများ, အတူအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများပါဝင်သည် တူကျောက်များ နှင့်ပွတ်သောကျောက်ဘောလုံး, shell ကိုအပိုငျးအများနှင့်ထိုမှပါး။ pictographs ဤဂူက်ဘ်ဆိုက်များသင်္ဂြိုဟ်ဒေသများနှင့်ဥပမာအနည်းငယ်တှငျမှတျတမျးတငျထားသခဲ့ကြသည်။
ဤအရှေးခေတ်က်ဘ်ဆိုက်များအများစုဟာကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်တွင်တည်ရှိသောခဲ့ကြသည်များနှင့်ပင်လယ်အဆင့်ဆင့်အတွက်အပြောင်းအလဲယခုအခါဘယ်သက်သေအထောက်အထားနစ်မြုပ်ခဲ့သည်။ အနောက်တိုင်းကျူးဘားမှာတော့ မုဆိုးစုဆောင်း ထိုကဲ့သို့သောအစောပိုင်း Ciboneys အဖြစ်အုပ်စုများ, ကောင်းစွာဆယ်ငါးရာစုသို့နှင့်အပြီးဒီ Pre-ကြွေဘဝစတိုင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အိုးပထမဦးဆုံးဒီကာလမှာတော့အေဒီ 800. န်းကျင်ကျူးဘားအပေါ်ထင်ရှားကျူးဘားယဉ်ကျေးမှုအထူးသဖြင့်ဟေတီနှင့်ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံကနေအခြားအကာရစ်ဘီယံကျွန်းစုထဲကနေလူတို့နှင့်အတူတစ်ပြင်းထန်သောအပြန်အလှန်, တွေ့ကြုံ။ ဤအကြောင်းကြောင့်အချို့ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေအိုးများ၏နိဒါန်းဤအကျွန်းများကနေရွှေ့ပြောင်းအုပ်စုများကြောင့်ခဲ့ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အခြားသူများကိုအစား, ဒေသခံတစ်ဦးတီထွင်ဆန်းသစ်မှုအတွက်ရွေးချယ်။
အာရိုယို del Palo အရှေ့ပိုင်းကျူးဘားအတွက်သေးငယ်တဲ့ site ၏ဆိုက်, ယခင်ရှေးကသြောအဆင့်၏ပုံမှန်ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်အပိုငျးအနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက်အစောဆုံးအိုးဥပမာတစျခုပါရှိသည်။
ကျူးဘားအတွက် Taino ယဉ်ကျေးမှု
Taino အုပ်စုများတစ်ဦးလယ်ယာစိုက်ပျိုးဘဝစတိုင်တင်သွင်း, အေဒီ 300 ဝန်းကျင်ကျူးဘားမှာရောက်ရှိလာခဲ့ကြပုံရသည်။ ကျူးဘားအတွက် Taino အခြေချနေထိုင်အများစုမှာကျွန်း၏ easternmost ဒေသတွင်း၌တည်ရှိသောခဲ့ကြသည်။
ထိုကဲ့သို့သော, La Campana, အယ်လ် Mango နှင့် Pueblo Viejo အဖြစ်ဆိုဒ်များကြီးမားသော Plaza နှင့်ပုံမှန် Taino ရဲ့ပူးတွဲဒေသများနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ကျေးရွာများဖြစ်ကြသည်။ အခြားအရေးကြီးက်ဘ်ဆိုက်များအတွက် Chorro က de Maíta၏သင်္ချိုင်းဧရိယာနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Buchillones, ကျူးဘား၏မြောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတစ်ဦးကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားပုံကျိန်းဝပ်ဆိုဒ်ကိုပါဝင်သည်။
ကျူးဘားဒါဟာ 1511 ခုနှစ်မှာစပိန် conquistador Diego မှက de Velasquez ရဲ့ဖြစ်စဉ်အားဖြင့်သိမ်းပိုက်ခဲ့သည် 1492. ခုနှစ်တွင်ကိုလံဘတ်စ '' ရေကြောင်းခရီးရှည်၏ပထမဦးဆုံးစဉ်အတွင်းဥရောပတို့ကသွားရောက်ကြည့်ရှုခံရဖို့ကရစ်ဘီယံကျွန်းစု၏ပထမဦးဆုံးအကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Buchillones
အာရိုယို del Palo
Chorro က de Maíta။
ဤသည်ခက်ဆစ်အဘိဓာန် entry ကိုရန် About.com လမ်းညွှန်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ကာရစ်ဘီယံ နှင့်ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ၏အဘိဓါနျ။
Saunders က Nicholas ဂျေ, 2005, ကာရစ်ဘီယံ၏ပြည်သူ့။ ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာနှင့်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုစွယ်စုံကျမ်း။ ABC ရုပ်သံ-CLIO, စန်တာဘာဘရာ, ကာလီဖိုးနီးယား။
Wilson ကရှမွေလ, 2007, ကာရစ်ဘီယံ၏ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ, ကင်းဘရစ်ကမ္ဘာ့ဖလားရှေးဟောင်းသုတေသနပညာစီးရီး။ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း, နယူးယောက်
Capacocha အခမ်းအနားကို - အင်ကာကလေးကိုယ်ကျိုးစွန့်များအတွက်အထောက်အထား
Aztec ဘာသာတရား - main aspect နှင့်ရှေး Mexica ၏ဘုရား
Hallstatt ယဉ်ကျေးမှု - အစောပိုင်းဥရောပသံခေတ်ယဉ်ကျေးမှု
Yaxchilán - မက္ကစီကိုအတွက်ဂန္ထဝင်မာယာစီးတီး-ပြည်နယ်
Torralba နှင့် Ambrona
Predynastic အဲဂုတ်တုပွညျ - အစောဆုံးအဲဂုတ်တုပွညျမှ Beginner ရဲ့လမ်းညွှန်
တောင်အမေရိက၏အင်ဒီး Cultures ၏ Timeline ကို
ယင်း၏အဆိုးဆုံးမှာရှုပ်ထွေးပြီး - ရှေးယဉ်ကျေးမှု၏ထိပ်တန်းလက်ခဏာ
ဘန်ကီမွန်းကချင်းမိုင် - ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ကြေးခေတ်ကျေးရွာနှင့်သုသာန်
Viper Powered Ram SRT-10 Pickup Truck ကား
လေက Character နဲ့အဓိကအကြောင်းအရာအားသုံးသပ်ခြင်းကိုအမွေ
တရုတ် Foot နှိပ်ရယူခြင်းမှတစ်ဦးကလမ်းညွှန်
ငါ Disc Brake သို့မဟုတ် Rim ဘရိတ် Get သငျ့သလော
အဆိုပါအမှောင်အတွက်ဒါက Glow အရာများစာရင်း
ပြင်သစ် preposition "Chez" ကိုသုံးပါဖို့ကိုဘယ်လို
Surface ကဧရိယာအားဖြင့် US မှာအကြီးဆုံးအေိုငျမြား
နေ့စွဲမုဒိမ်းအကြောင်းခရစ်ယာန်ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေဟာ '' မေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေအဖြေ
ဘယ်ရော့ခ်ဖိနပ်ရော်ဘာတက်ခြင်းဟာ Stickiest ပါသလဲ
Neoplatonism, Platio ၏များ၏အဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်ခြင်း
တရုတ်က Character 家အဘယျသို့ဆိုလိုသနညျး
Period table တွင်အဖွဲ့များ၏စာရင်း
Lindsay Lohan, မီဒီယာနှင့်ပြိုလဲမရိန်း
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီး: ဗိုလ်ချုပ်အလက်ဇန်းဒါး Hayes
ကို '80s ၏ထိပ်တန်း .38 အထူးသီချင်းများ
"အငြင်းပွားမှုများ" (သဘောမတူပါရန်) Conjugate လုပ်နည်း